ကျူးကျော်အိမ်ထောင်စု တစ်သိန်းကျော်အတွက် တွံတေးမြို့နယ်တွင် ဧက ၃၀၀၀ လျာထား -
ကျူးကျော်အိမ်ထောင်စု တစ်သိန်းကျော်အတွက် တွံတေးမြို့နယ်တွင် ဧက ၃၀၀၀ လျာထား
Posted on ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 24, 2018 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 24, 2018 by Shine Akari
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျူးကျော်အိမ်ထောင်စု တစ်သိန်းကျော်အတွက် အိမ်ယာဆောက်လုပ်ရန် မြေဧက ၃၀၀၀ ကျော် သိမ်းဆည်းထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း မြို့ပြနှင့် အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
“ ကျူးကျော်အိမ်ထောင်စုတစ်သိန်းကျော်အတွက် အိမ်ရာတည်ဆောက်မှုကို တွံတေးမြို့နယ်နဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မြေဧက ၃၀၀၀ ကျော်ကို သိမ်းပြီးပါပြီ။ ဆောက်လုပ်မှုကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရက ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးယုခ်ိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါနေရာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ စီစဉ်လျက်ရှိပြီး အိမ်ရာများကိုလည်း နှစ်ရှည်အငှားအိမ်ရာနှင့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများအဖြစ် ဆောက်လုပ်ရောင်းချရန်နှင့် အိမ်ရာများပြီးစီးပါက ကျူးကျော်စမတ်ကတ် ကိုင်ဆောင်သူများကိုလည်း အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် စမတ်ကတ်ထုတ်ပေးထားသည့် ကျူးကျော်အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး လူဦးရေဖြင့်တွက်ချက်ပါက လေးသိန်းကျော်ရှိသော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသန စီမံကိန်းအရ ယင်းအိမ်ထောင်စုများကို ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စလစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြေပြင်တွင် အမှန်တကယ် နေထိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိ စိစစ်နေကြောင်း ၎င်းမှဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
Posted in ပြည်တွင်းသတင်း, သတင်း
လေပြင်းဒဏ်ခံခဲရသော ကြာကန်ကျေးရွာ အုပ်စုအား ကူညီထောက်ပံ့
Just where Do I GetaWomen At this point?
Looking For Marriage Tricks for Women?
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၇ သန်းဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော် ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းအား ကြိုးချည်ပြီးမှ နိုင်ငံတော်ထိပ်ပိုင်း သုံးဦးထံ အလှူခံမည်